“एमिली र त्यो चिज” र “एमिलीको खरायो” नेपालीमा | साहित्यपोस्ट
how to change country on zoosk how to figure out if someone is on tinder adam4adam net how to get unlimited likes on tinder for free
“एमिली र त्यो चिज” र “एमिलीको खरायो” नेपालीमा
साहित्यपोस्ट	 प्रकाशित ८ मंसिर २०७८ १५:०२
बालबालिकाका लागि उपयुक्त पुस्तक प्रकाशन गर्ने कथालय इन्कले “एमिली र त्यो चिज” र “एमिलीको खरायो” चित्रकथालाई नेपाली भाषामा प्रकाशित गरेको छ। यी चित्र पुस्तकहरुको नेपाली अनुवाद भिक्टर प्रधानले गरेका हुन् ।
यी बाल पुस्तकलाई होड्डर र स्टोङ्टन् ( ह्याचेट चिल्ड्रेन ग्रुप) प्रकाशकले सन् २००७ मा बेलायतबाट प्रकाशित गरिसकेको छ ।
साहित्यपोस्ट	 १८ आश्विन २०७८ १५:५३
चित्रकथा ‘लडाकु माछा’ प्रकाशित
१३ बैशाख २०७८ २२:३५
मही पार्ने रहर प्रकाशित
२५ चैत्र २०७७ १२:२६
जिराफ र कङ्गारुबारेका दुई बालकथा प्रकाशित
१७ चैत्र २०७७ १६:१०
“एमिली र त्यो चिज” चित्रकथामा एक जना सानी केटी हुन्छिन्, जसको नाम एमिली हुन्छ । र, उसको एउटा पुरानो खैरो खरायो हुन्छ, जसको नाम स्टेनली हुन्छ । एमिली र उसको पुरानो खरायो स्टेनली निदाउने कोसिसमा हुन्छन्, तर एउटा आवाजले उनीहरुलाई बिउँझै राख्छ, निदाउनै दिँदैन। त्यो अनौठो आवाज केको हो ? कसको हो ? अथवा केले त्यो आवाज निकालिरहेको छ ? यो चित्रकथाले पाठकमा यस्तै प्रश्न र कौतुहलता जगाउने प्रयास गरेको छ ।
त्यस्तै अर्को चित्रकथा “एमिलीको खरायो” मा एमिली र स्टेनली परदेशको जीवन र त्यहाँको चालामाला कस्तो रहेछ हेर्न भनेर अन्तरीक्षको नभ-मण्डलमा पुग्छ। नभ-मण्डलमा पुगेको मात्र के थिए, त्यहाँको महारानीले एमिलीको खरायो मन पराउँछिन् र खरायो लिन आफ्ना चाकारहरुलाइ पठाँउछिन् । तर एमिलीले आफ्नो खरायो बिक्रीमा नरहेको प्रष्ट पार्दै आफ्नो खरायो दिन साफ इन्कार गरिदिन्छिन्। त्यो खरायो नै महारानीलाई किन चाहिएको होला, त्यो खरायो पाउनका लागि महारानीले के कस्तो प्रयास गर्छिन् त ? यस्तै प्रश्न र कौतुहलता पाठकमा जगाउने प्रयास यस चित्रकथाले गरेको छ।
यी चित्र पुस्तकहरुमा बालबालिकाले निअल लेटनले बनाएको फरक र रमाइलो चित्र हेरेर कथाबारे धेरै कुरा बुझ्न सक्छन् । तिखो बुद्धि, दयालु मनको पात्र र उत्तम विषयवस्तु यी पुस्तकहरुले समेटेको छ । बालबालिकामा प्रश्नको उत्तर खोज्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि र जिज्ञासा उत्पन्न गराउन यी चित्र पुस्तकहरुले प्रचुर मदत गर्नेछ ।
समालोचकमा इमानदारी र ज्ञानको अभाव – साहित्यमा त्यसको असर